Dawladda Jabuuti oo madaxweyne Farmaajo ka dooneysa laba arrin midkood (Aqriso) – Xeernews24
Dawladda Jabuuti oo madaxweyne Farmaajo ka dooneysa laba arrin midkood (Aqriso)
2. August 2018 /in WARAR/NEWS /von admin
Dowlada Jabuuti ayaa markii ugu horeysay godob siyaasadeed ka tirsatay dowlada Soomaalia ee uu hogaamiyo Madaxweynaha Soomaalia Maxamed Cabdullahi Farmaajo.
Jabuuti waxa ay sheegtay in Soomaalia ay u muuqaneyso mid uga hiilineysa dowlada Eriterea hayeeshee la doonaayo inay ka laabato dalabka Madaxweyne Farmaajo ee ahaa in cunaqabateynta laga qaado Eriterea.
Dowlada Jabuuti waxa ay kaalin weyn kaga jirta dowladaha gurmadka u fidiyay Soomaalia tan iyo wixii ka danbeeyay burburka Soomaalia.
Jabuuti waxa ay ku andacooneysaa in wakhtibadan ay u hurtay Soomaalia si ay uga ambaqaadi laheyd halka ay dhowr sanno ka hortiilay, hase yeeshee dowlada Soomaalia oo ay ku badan tahay dhaliilaha ayaan ka fiirsan ilaalinta shacuurta dowladaha kale ee saaxiibada la ah.
Jabuuti waxa ay fileysay in Soomaalia ay ku doodi doonto in marka hore Eriterea ay dib u celiso dhulka ay ka heysato Jabuuti, balse ma noqon sida ay arrinku mooday, waxa ayna Farmaajo iyo Afwerki ahaayen kuwo kulamadii dhexmaray uga hadlay arrimahooda gaarka ah.
Waxa ay dowlada Jabuuti siyaasad ahaan is khilaafsan yihiin dowlado dhowr ah oo dhaca Qaarada Africa sida Eriterea iyo Ethiopia oo dhawaan ay ka heshiiyeen khilaafka.
Waxaa muuqaneysa in Jabuuti ay dhowr jeer ku celcelisay in Eriterea oo dal ciidan ah looga qaado dhulkeeda, hase yeeshee ma aysan dhicin in dalabkeeda dheg loo raariciyo.
Haddaba Madaxweyne Farmaajo oo saaxiib dhow la ahaa Madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciid Geele ayaa waxaa la gudboon 2 arrin midkood si aan loo didin Jabuuti kuwaa oo kala ah:-
1-In Madaxweyne Farmaajo uu raali galin degdeg ah ka bixiyo dalabka uu aduunka u jeediyay ee ahaa in cunaqabateynta laga qaado Eriterea.
2-In wadahadal iyo waan-waan degdeg ah uu ka dhex bilaabo Eriterea iyo Jabuuti, isagoo adeegsanaya dowladaha saaxiibada la ah labada dal sida Ethiopia, Ugandha, Kenya iyo Suudaan.
Madaxweynaha Soomaalia Maxamed C/llahi Farmaajo oo dhaliisha kaga imaaday dowlada Jabuuti ku noqotay mid lama filaan ah ayaan la garan doonin waxa uu ka yeeli doono cadhada iyo xanaaqa kaga imaaday Jabuuti.
Si kastaba ha ahaatee, inta badan dowlada Soomaalia ayaan xor u aheyn cabirka aragtida, iyadoo ay hubaal tahay in dhaliilo heer xun gaadhi kara ay kaga imaaneyso dowladaha kale maadaam Soomaalia tahay mid aan isku filneyn.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/02/dagax_2.jpg 475 634 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2018-08-02 06:30:252018-08-02 06:30:25Dawladda Jabuuti oo madaxweyne Farmaajo ka dooneysa laba arrin midkood (Aqriso)
Jabuuti oo ka werwersan hadal Farmaajo uu ka sheegay Asmara ( Akhri Warsaxa... Xasan Sheekh oo war ka soo saaray Xiisadda ka dhalatay Booqashii Madaxweyne...